Ubuchwepheshe Bokuqashelwa Kwezinhliziyo Zekhamera nobuchwepheshe obukhulu bedatha
Njengoba sibhekene no-2016, Ukuphathwa Kwezinhlamvu sekungeziwe kokuhlaziya ukwamukele imisebenzi ye-Aegis. Izenzo ze-Contro zezenzo zobuphekula, izingqinamba ze-aegis eziboshwe ...
Njengoba sibhekene no-2016, Ukuphathwa Kwezinhlamvu sekungeziwe kokuhlaziya ukwamukele imisebenzi ye-Aegis. Izenzo zePosopo zezenzo zobuphekula, izingqinamba ze-aegis eziboshiwe, kanye nenkinga yababaleki yizibonelo ezimbalwa ezisiyala izingozi ezingezwani esibhekana nazo namuhla.
Eminyakeni yamuva nje, izinhlangano nezinhlaka zikahulumeni ezivamile zamukela ama-amorphous ukulindele okuningi ezixazululweni ze-biometric zezenzo zezenhlangano kanye nemisebenzi.
Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokuhlonza izimo ezingenamkhawulo
Abantu besaba ngokwengeziwe ngesiqinisekiso sabo nokuphepha. Bafisa ukuzwa indawo ephephile basebenza, badlulisele isikweletu sabo esikoleni, esitolo, esidliwe, futhi bavele nemicimbi ye-antic nebhola. Lawa ma-apropos anezinkinga zokuziphendulela ngokuphelele zamabhizinisi, izikole, kanye nomasipala. Lo mqondo ongenamkhawulo usebenza ngesinqumo esingeziwe sezixazululo ze-aegis nge-avant-garde ukuhlonza ubuchwepheshe obunembile, ngokushesha, futhi ongakwazi't ngomoya ophansi kwephulwe.
Ngeshwa, kunezimo ezivame kakhulu indawo ebeka ubuso ne-ID noma i-ajenda yokwamukelwa ngokunganaki azina ziningi ukuqinisekisa ubunikazi bomuntu. Lokhu kunqunywe ukunqunywa kwezicelo zokuhlaziya njengokufika, ukulawula okuboshwe, kanye nokuvunyelwa kwebhayisekili. Izinhlelo zezinhlamvu eziphikisana kakhulu zingaba ukubhebhethekisa kakhulu kulezi zimo - ukumangalela ubuciko bokubopha nokuzola ama-Annals futhi ahlaziye amanani amaningi aphezulu.
Izinkampani zamukela ngedwa isabelomali sazo ngonyaka ka-2015 ukuthuthukisa i-aegis ngobuchwepheshe be-biometric, njengokuqashelwa kwe-IRIS
Ukubhekana nokukhathazeka kwe-aegis ezungeze
Ukuphakela ubunikazi kuzohlala kudlala indima ye-cogent e-aegis kuwo womabili futhi ingane. Ngomlilo wentuthuko ye-abstruse kanye nokukhathazeka kwe-aegis ezungeze i-aegis, kunamathuba amaningi ezinkulu zezinkampani ze-aegis namuhla, umkhuba ozohlala ungene ngo-2016 nangale kwalokho. Lezo zinhlangano - bobabili abasebenzisi bokugcina kanye nabahlinzeki be-aegis - ababona futhi baqaphele kanye nokuvuselelwa kwe-aegis kanye ne-comment Administration mural kuzoba abawinile.
PHAMBI Ungavuma kanjani ngeMakethe Ebucayi Bama-Indian
I-R & D isiza ukukhetha abakhiqizi baseChina bavelele OLANDELAYO